Soo-saareyaasha Shiinaha iyo Soo-saareyaasha Shiinaha EB WEBBING | Chenli
Xidhitaanka silsiladda korantada
Dheecaan / Pulley / Magnetic
Mashiinka Wax riixa
XARUNTA DHAQANKA EE EB
Diyaargaraw taxaddar leh, Uqeexid la'aan
▲ Clingli wiish shaashadda hadda waxay noqotay shirkad horseed ka ah Shiinaha. Waxaanuna abuurnaa aqoon-isweydaarsiga ugu weyn. Chenli waxay leedahay khadka waxsoosaarka dhameystiran laga bilaabo walxaha ceyriinka ah ilaa alaabada la dhammeeyay. Qalliin kastaa wuxuu leeyahay aqoon-isweydaarsi madaxbanaan, sameynta wiishka dhiqlaha, suunka wiishka, suunka gaariga jiida laga bilaabo 0.5T ilaa 3000T. Waxaan awood u leenahay inaan si dhakhso leh u dhammeyno amarka weyn.
▲ Chenli hadda waxay leedahay qalab dhan oo ah tijaabooyin qumman, oo hubinaya inaan damaanad qaadi karno tayada shakaagga wareega, laga bilaabo 20T to3000T, iyo shakaalka wejiga, laga bilaabo 20T illaa 50T.
▲Marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhaqaale, macaamil kastaa wuxuu raadiyaa faa'iidada ugu badan. Tirada dalabkeena ayaa kordhay 40% marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay. Rumayso awooda lammaanaha, rumayso Chenli.
▲ Weji goynta, sameynta naqshadeynta iyo farsamooyinka cusub ee qodista ayaa ah waxa siiya websaydhku inuu sifiican u jabo.
▲ Difaaca khaaska ah ee looxyo iyo looxyo la xoojiyay ayaa dhamaantood ka ilaaliya burburka iyo burburka. Waa dammaanad qaad iyo nolol adeeg aad u dheer. Xargaha gogosha ayaa laga soo saaray guryaha sare.
▲ Tani waxay u oggolaaneysaa heer sax ah oo kontorool tayo leh.
▲ Shakaada wareega ayaa leh culeyska ugu badan ilaa 3000T, dherer wax ku ool ah oo ilaa 100m ah badbaadada qodobka ayaa sida caadiga ah 7: 1,6: 1.
▲ Shakaagga wareega waxaa laga sameeyay jawi warshadeed oo kacsan (100% PES), ciriiriyada gudaha ka jira waa qaab wareega oo aan dhamaad laheyn.
▲ Xirmooyinka wareegga ayaa ah xalka ugu habboon ee qaadidda xamuulka aaminka ah, haddii tani ay noqon karto shaqooyinkaaga, rarka iyo dejinta ama isticmaalida goobta dhismaha. Xadhkaha wareegyadu waxay ilaalin doonaan waxyaabaha la qaado. dharka gacantu dibedda waa dillaacaa, oo xadhkaha gudaha ayaa ka bixi doona, sidaa darteed shakaagga looma adeegsan karo mar dambe. Xarigga adag iyo lakabka daboola waxay dammaanad qaadi doonaan nolol aad u dheer oo shaqeynaya, xiitaa marka la sii wado. Xadhkaha dharka ayaa sidoo kale la hagaajin karaa.
Habka Dhifashada EB Webbing Sling 'iyo Xaddiga Badbaadinta Shaqada Badbaadada Badbaado.
Hubi jeegaantu waa wax iska jiraan
U adeegso gacmo-gashi ilaalin ah haddii aad kor ugu qaadid alaabta leh geesaha fiiqan.
La soco xagasha.
Ha u oggolaan culayska saaran shakaalka. Ha u jiidin culayska shakaalka.
Ha buux dhaafin hana ogsoonow heerkulka.
Ka taxaddar kimikooyinka.
Slings waa in aan marna la taaban ama la qalloocin.
Ha isticmaalin shaatiinka dhaawacmay.
CUDURKA DHEXE EE AY SAMEEYSA
Hore: EB-AQOONTA Websaydhka
Xiga: XEERARKA GUUD EE DABKA IYO DABKA
Sling Big Sling
Eb Round Sling
Xarkaha Fiber Syl
XARUNTA DHAQANKA EE EB-B
DHAQAALAHA EA-B RIIX
BIG SIZE DYNEEMA RIIX OO LAGU SAMEEYO
Halkan guji si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah
Alaabada kulul - Khariidadda Goobta Akhri wax dheeraad ah
KU SAMEE TUUG
NO.33 FAZHAN EAST ROAD, Khilaafaadka QINGYUAN, BAODING, HEBEI, CHINA